အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 14, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီတစ်ခါလည်းဒီနေ့ထိတွေ့မှုရရှိရန်လူတစ် ဦး နှင့်ဝဘ်နာမှတစ်ဆင့်အနည်းငယ်သောအဖြစ်အပျက်များကိုကျွန်ုပ်ဖိတ်ကြားခဲ့သည် လူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူ နှင့်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်အပေါ်သူတို့ယူ။ သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့ LinkedIn အချက်အလက်၊ သူတို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အခါသူတို့ဟာလူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအထောက်အကူပြုတဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုငါရှာမတွေ့ဘူး။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကျွမ်းကျင်သူ? တကယ်လား သူတို့တွင်သောင်းချီသောတွစ်တာနောက်လိုက်များနှင့်သူတို့၏ရာပေါင်းများစွာသောမှတ်ချက်များရှိနိုင်သည် Facebook က ဒါဇင်နှင့်ချီသောကွန်ရက်များ၌အသင်း ၀ င်ခြင်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ပဲ charlatan တစ်ငါးမန်းသို့မဟုတ် geek.
ငါလူမှုမီဒီယာအဖြစ်အဘယ်အရာကိုခွဲခြားလိမ့်မယ် ကျွမ်းကျင်သူ? ငါပတေရု Shankman ရဲ့စာရင်းကိုချစ်ကြတယ် လူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အရည်အချင်းများနှင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီခြင်း။ ငါပေါင်းထည့်မယ်၊ ဒါကစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ငါကြည့်ချင်တယ် တိုင်းတာနိုင်သောရှည်လျားသောစာရင်း ကုမ္ပဏီများနှင့်မဟာဗျူဟာအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီးရလဒ်နှင့်ကိုးကား။
ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သလား ကျွမ်းကျင်သူ? ငါလုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအဲဒါကိုအလုံးစုံနားလည်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး ဤသည်လူငယ်တစ် ဦး အလတ်စားနှင့်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့။ ဒါကစီးပွားရေးအပြုအမူကိုပြောင်းလဲနေတယ်။ ဒါဟာစားသုံးသူရဲ့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆယ်စုနှစ်အတွေ့အကြုံသည်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဒေတာဘေ့စစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစသည်တို့မှတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအခြေအနေသို့ပြောင်းလဲလာသည်။
ကျွန်ုပ်သည်လူမှုမီဒီယာနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုကျွမ်းကျင်သူဟုမဆိုပါ။ ကုမ္ပဏီငယ်များနှင့်အသေးစားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြီးထွားစေရန်၊ ဖောက်သည်များအားထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ရောင်းရန်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ထိရောက်စွာလူမှုမီဒီယာအသုံးချ။
စဉ် Blogging platform ၏ VPကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာအားသူတို့၏လူမှုမီဒီယာများနှင့်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ငါအောင်မြင်တယ် မီဒီယာအေဂျင်စီအသစ် ကုမ္ပဏီများသည်လူမှုရေးမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင်ခိုင်မာသောသမိုင်းကြောင်းရှိခြင်း။
ငါ၌ငါတီထွင်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အလိုအလျောက် tools များ ဘလော့ဂ်, အီးမေးလ်က, ဗီဒီယို နှင့်မိုဘိုင်းအာကာသသောင်းချီသောကုမ္ပဏီများရောက်ရှိပါပြီ။
အဆိုပါ2လူမှုရေး ကွန်ရက်များ ငါစတင်ကူညီခြင်းနှင့် run ကိုကူညီဆက်လက်။
လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာနှင့်စကားပြော 5+ နှစ် (အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်စုံတွဲတစ်တွဲပို) အထိသက်တမ်းရှိသောငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်။
မဟုတ်ဘူး! ဒီအရာအလုံးစုံငါ့ကိုတစ်ခုအရည်အချင်းပြည့်မီ ကျွမ်းကျင်သူ.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရှာ ကျွမ်းကျင်သူများကgurus နှင့် geeks မဟုတ်ပါ။
ကျွမ်းကျင်သူဆိုသည်မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းစနစ်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုအရင်းအမြစ်အဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာအသိအမှတ်ပြုခံရသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်မှန်ကန်စွာ၊ ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး သည်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတရှိသူ။
ငါ့အလုပ်အားလုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီလား။ မဟုတ်ပါ - သို့သော်များစွာသောရှိပါတယ်.
ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်နည်းပညာကွာဟမှုကိုမည်သို့ကျော်လွှားနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရာတွင်ထူးကဲသောအရည်အချင်းရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ငါမကျင့်ဘူး ဖောက်သည်များကိုလိမ် ပြီးတော့ရှင်သန်ချင်ရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့ကိုပြောပါ။ ငါသူတို့နှင့်အတူအောင်မြင်မှုများစွာမျှဝေကြဘူး! ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျယုံကြည်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မွေးစားခြင်းကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်သည် - ၎င်းသည်မကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နိုင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများမှတွန်းအားပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားအလားအလာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည်၊ ဖောက်သည်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သည်၊ ဖောက်သည်များ ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်ကုမ္ပဏီများကိုတွန်းအားပေးသည်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတည်ဆောက်သည်။ အတွေးခေါင်းဆောင်မှု၊
ထိုအဆွေခင်ပွန်းတို့၊ ကျွမ်းကျင်သူ အမြင်။
PS: သင်သည်ငါ၏ဘလော့ဂ်သို့ပြန်သွားလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဘလော့ဂ်များတွင်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြေငြာသူလူနည်းစုများနှင့်ထိတွေ့နေသောအခြားဘလော့ဂ်များတွင်မှတ်ချက်များရှိလျှင်သေချာသည်။ အခုသင့်ရဲ့အလှည့်ပါ 🙂
သင်၏ Youtube ဗီဒီယိုများကိုခြေရာခံပါ
ဖောက်သည်တစ် ဦး ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အီးမေးလ်တစ်စောင်မည်သို့ရေးဆွဲရမည်နည်း
14:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 48
14:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 28
14:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 14
14:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 51
သူ Mike အင်ဒရူး
15:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 13
15:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 17
15:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 12
17:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 10
နိုဝင်ဘာလ4ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 12:52 နာရီ
နိုဝင်ဘာလ4ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 12:56 နာရီ